ठमेल क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको ‘असुलीधन्दा’ : भाडामा बस्ने ‘ट्राफिक, पैसा बुझाउने व्यापारी ! | Diyopost
ठमेल क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीको ‘असुलीधन्दा’ : भाडामा बस्ने ‘ट्राफिक, पैसा बुझाउने व्यापारी !
काठमाडौं, ३ जेठ । प्रहरी, सेना, निजामति कर्मचारी लगायत सरकारी निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई जनताको करबाट तलब दिइन्छ । जनताकै करबाट उनीहरुको कार्यालय बन्छन्, जनताकै करबाट उनीहरुको आवास व्यवस्था गरिन्छ । त्यसको लागि नै सरकारले गृहमन्त्रालय मार्फत सुरक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च गरेको छ । तर, ठमेल क्षेत्रमा भने ट्राफिक प्रहरीले घर भाडा बापत छुट्टै रकम असुल्दै गरेको पाइएको छ । अर्थात ठमेलमा कार्यरत १८ जना ट्राफिक प्रहरी बसेको घर भाडा भने एक व्यापारिक समुहले तिर्ने गरेको पाइएको हो । दियोपोस्टलाई प्राप्त भौचर अनुसार ट्राफिक प्रहरी बसिरहेको घरको भाडा भने ठमेल पर्यटन विकास परिषदले तिर्ने गरेको पाइएको हो । ठमेल पर्यटन विकास परिषद भनेको ठमेल क्षेत्रमा रहेको सबै व्यापारीहरुको समुह हो ।
परिषदले ट्राफिक प्रहरी बसेको घरको भाडा बापत महिनामा १८ हजार घरबेटीलाई बुझाउँदै आएको छ । ठमेल स्थित श्याम श्रेष्ठ घरमा १८ जना ट्राफिक प्रहरी बस्नै आएका छन् । प्राप्त कागजात अनुसार प्रति महिना १८ हजारका दरले ३ महिनामा ५४ हजार र कहिलेकाँही ५ महिनाको एकमुष्ट रुपमा ९० हजार रुपैयाँ सम्म बुझाउने गरेको छ ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्वअध्यक्ष रामशरण थपलियाले पहिले स्वर्गिय नाम्गेल लामा अध्यक्ष रहँदाको समयमा ट्राफिक प्रहरीलाई ठमेलमा ल्याएको बताए । ‘हामीले नै अनुरोध गरेर ल्याएका हौँ । त्यतिबेला थोरै संख्यामा थियो । अहिले अलि बढी भएको छ,’ उनले भने ।
प्रहरी प्रवक्ता भन्छन्,‘नागरिकले सहयोग गर्न पाउँछ’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरीले नागरिकबाट सहयोग लिन पाउँदैनन् र भन्दै प्रश्न गर्छन् ।
जनताकै करबाट प्रहरी कर्मचारीलाई सरकारले आवास र तलब दिने गरेको छ नी होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘अफिसकै भाडा भए म बुझेर मात्रै फोन गर्छु ।’
ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख एसएसपी बसन्त पन्तको ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष तेजेन्द्र नाथ श्रेष्ठसँग निकट उठबस छ ।
महासाखाका प्रमुख बसन्त पन्तलाई आफ्नो होटल थर्ड आई, यीङयाङमा बोलाएर खानपान गराउने गरेका श्रेष्ठकै लगानी र आयोजनामा मंगलबार एक कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको थियो ।
ट्राफिक प्रहरी आयोजना गरेको कार्यक्रम भनेर सहभागीलाई निम्ता गरिए पनि उक्त कार्यक्रम आयोजक भने व्यापारी श्रेष्ठ नै थिए । ठमेल विकास परिषदबाट अतिरिक्त भत्ता दिने मात्रै होइन व्यापारी श्रेष्ठकै योजनामा ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुने गरेको छ ।
उनै श्रेष्ठको लगानीमा ठमेल स्थित होटल यात्रीमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
मंगलबार दिउँसो २ बजेदेखि शुरु भएको कार्यक्रम उद्घाटन गर्न एसएसपी बसन्त पन्त र सोह्रखुट्टेका डिएसपी गौतम केसी पुगेका थिए । ‘ट्राफिक प्रहरीलाई परिषदले दिएको अरिक्त घर भाडा सबै व्यावसायीको हो । तर, अहिले तेजेन्द्र श्रेष्ठले आफैले दिएको जस्तो प्रहरीलाई नै दुरुपयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने,‘अहिले ट्राफिक प्रहरीले लिएको घर भाडा पनि विवाद हुने स्थितिमा पुगेको छ ।’
होटल यात्रीमै पटक पटक व्यापारीकै योजनामा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम हुने गरेको छ । यता होटल यात्रीका मालिक सागर पाण्डे भने फेक रेस्क्युमा छानबीनमा परेका व्यक्ति हुन् । पाण्डे कुनै समय ट्रेकिङ व्यावसायीहरुको छाता संगठन टानका महासचिव समेत थिए ।